Lapho ekhetha utamatisi, okokuqala kudingeka unqume kuphi futhi kanjani uzokhula. Namuhla ezitolo ezikhethekile kanye nezimakethe banezeluleko olukhulu imbewu ekhanyayo, futhi yokutshala endaweni abamba ukushisa. Kuthathwa izinhlobonhlobo engcono utamatisi - kungcono nzalo. Sinenkosi isivuno eliphezulu, ekuseni yokuvuthwa izikhathi, ngempela amelana izifo, ikakhulukazi ukuze okulimaza sekwephuzile. Ake uqale nge evulekile phansi izinhlobo.
Nakubukwa zeminyaka eyedlule, lapho esekhulile ekhanyayo, izazi zikholelwa ukuthi ukusebenzisa engcono izinhlobonhlobo utamatisi kanje:
- King of the Market II. Kuyinto hybrid maphakathi no-determinate we F1, nge ezinkulu, kuze kufinyelele 140 amagremu izithelo. Kuyinto ukumelana nezifo, ukucindezeleka ngokuhlaziya izithelo. Anakho ukunambitheka omuhle, awusebenzi ukuwohloka phakathi zokuthutha olude. Ingasetshenziselwa for ukuwafaka futhi fresh.
- Hybrid F1 Mona Lisa amatende kusukela ifilimu kanye emhlabathini evulekile. Lokhu ekuqaleni-yokuvuthwa determinate ezihlukahlukene macrocarpa. He is ongaphakeme, izithelo - kuze 250 amagremu, ezihlwabusayo kakhulu. Mona Lisa iyiphi indawo izithelo ezinhle ezikhulayo.
Lokhu ukuhoxa izinhlobonhlobo utamatisi, ngakho ukuphuma ukutshala abatshali eziningi.
- Ukuze ezindaweni umoya obandayo is utamatisi kuhambisana kahle Amber Shtambovji kungadzingeki pasynkovaniya. It kungokwalabo izinhlobo kom futhi linamandla kakhulu. It has a izithelo yellow elikhanyayo nesisindo 90 amagremu. It zingatshalwa indlela nonseedlings, ngisho sikhula kahle ezindaweni ezibandayo e.
- Early ukukhula utamatisi Shuttle ingasetshenziswa i emhlabathini olungavikelekile kanye zokugcina. grade Shtambovji, aphansi. Izithelo side, okusaqanda, nesisindo 70 amagremu. Izinhlobonhlobo ayidingi pasynkovanii. multi-purpose izithelo. Izinzuzo zihlanganisa ukuphatheka zalo ezinhle, isivuno high.
- Ukuze ezindaweni sezulu imnene kakhulu kufanelekile Snowdrop grade polushtambovy, izithelo nxazonke abomvu. Yenza ezintathu sifanamsindvo, akudingi pasynkovaniya.
- Kulaba izinhlobo kamuva Ukukhetha ukuncoma okungcono utamatisi izinhlobo ezifana Klondike ezinkulu-fruited determinate futhi okusajingijolo Vikante. Klondike akudingeki pasynkovanii. Izithelo zakhe ukufinyelela isisindo 350 amagremu, orange, isaladi uya khona.
- Ukuze ultraspelym amakilasi zihlanganisa Buyan, Flash, Sunny Bunny, Pink umholi isikhumbuzo nzalo we Redskins, Solerosso, Kate nabanye.
Izinhlobonhlobo ngoba zokugcina
Ethandwa kakhulu izinhlobonhlobo utamatisi for greenhouse ukutshalwa, uju cishe pink, olintshi Miracle emakethe.
Pink Honey - ezinkulu-fruited kakhulu, ngokuphawulekayo okumnandi, isifo nemithi. Esikhathini emabhulashini kuqala izithelo mass kungenzeka amakhilogremu ngaphezulu. Izinhlobonhlobo kungokwalabo zizalela laseSiberia. He is ongaphakeme - kufika ku-70 cm, rozovoplodny, isaladi uya khona.
Orange - poludeterminantny, maphakathi. Izithelo orange, meaty kakhulu, nge zizwakale kahle. isisindo sabo - 400 amagremu.
Market isimangaliso - ezihlukahlukene indeterminate, efanelekayo zokugcina okusezingeni eliphezulu. Izithelo isisindo afinyelela ku-700 t. Izithelo kuhluke ukunambitheka omuhle.
Okuhle Ngomsebenzi zokugcina izithombo eKönigsberg grade - indeterminate, izithelo side nesisindo 300 grams. Ifanele workpieces.
Kusengenzeka ethandwa izinhlobo ezindala inhliziyo Bullish futhi Budenovka. Kuyinto indeterminate, izinhlobo ezinkulu-fruited ne okumnandi esinamanzi izithelo isaladi uya khona. Izithelo isisindo kuze kube 400g. abalandeli abaningi namanje uthanda ke.
Semco Hybrid - ekuqaleni ukukhula ngezithelo obomvu esinamanzi, ubukhulu akuyona phansi kunabaphostoli Budenovka.
inyama Crimson, uSherry lady ucingo Okuphakade nge ezibalwe ngenhla izinhlobonhlobo engcono utamatisi for abamba ukushisa.
Ukuze ongaphakeme ifilimu zokukhosela ukuncoma ePharadesi, Irgandu, Beef, Pavlovskaya rose, Major, Raju nezinye izinhlobo kakhulu.
Utamatisi izinhlobo eziningi kangaka. Uma ngabe wahlanganyela ingadi, cishe yakho, ozithandayo, ocabanga engcono. Ngifisa sengathi ngabe impumelelo ngokuzalanisa kubo, futhi isivuno esikhulu!
Chrysanthemum Igumbi: izincomo Esiwusizo ukutshala
Fire amabhu - violet. Incazelo ezihlukahlukene, ukutshalwa ekhaya
Utamatisi "Bear Paw"
Indlela ukusingatha strawberry entwasahlobo? Uyabakhathalela strawberry ngasekuqaleni kwentwasahlobo
Phalaenopsis orchid Umhlabatsi isidingo?
1721 emlandweni Russian. Russian Empire Ezemfundo
Njengoba kufanele sigcwaliswe efaka umquba apula izihlahla?
Aries ne-Capricorn, ukuhambisana phakathi kwayo kwakuthiwa kungenzeka!
Darya Simonova, umbhali: Biography, lokusungula
Software kusuka "1c" inkampani emsebenzini inkampani ukuphathwa.
"Thola indawo khulula - kungcono ngempela!" - inkampani OLIT
Ukukhishwa kwekhwalithi yokudlulisa okuzenzakalelayo
Entabeni Austria: igama, ukuphakama. Geography of Austria
Cognac "Martin": ukubuyekezwa. "Remy Martin Louis 13": intengo, incazelo
Aluminium brand: izinhlobo, izakhiwo kanye nezicelo